टेरिनको कथा: अनिश्चिततामा परिवर्तन फेला पार्दै
Rocio Rodarte मा सेप्टेम्बर 22, 2020 द्वारा लिखित।
ट्यारेन विलियम्सको चुम्बकीय व्यक्तित्व र संक्रामक हँसीले सामान्य भिडियो सम्मेलन कलको एकलतालाई सजिलैसँग पार गर्न सक्छ जुन हामी धेरैको लागि सबै परिचित भयो। क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटी ल Long्ग बीचमा पूर्ण-समय विद्यार्थी र five बर्षे जुम्ल्याहा यशैया र म्याकयालाकी आमा, टेरिन कठिन परिस्थितिमा भारी भारका चुनौतीहरूको लागि कुनै अपरिचित होइनन्। हाम्रो भिडियो कुराकानीको क्रममा उनले खाजा खाएपछि उनी उत्साहका साथ यस गर्मीमा लक्ष्यमा उनको कार्यकारी इंटर्नशिपको बारेमा कुरा गर्छिन्। थिसिस असाइनमेन्टहरू, जीआरई अभ्यास परीक्षणहरू, र आवेदन अन्तिम मिति भरिएको उनको प्याक र color्गकोडेड क्यालेन्डर देखाउन मलाई फर्केर झुकाउँछिन्। "यो पूर्ण पागलपन हो," उनी विस्तृत मुस्कानका साथ टिप्पणी गर्छिन्।
धेरै कलेज विद्यार्थीहरूलाई जस्तै, टेरिनले COVID-१ college लाई दिनहुँ सामाजिक अन्तरक्रियामा कलेज क्याम्पसहरूको हलचलमा ल्याउने महत्वपूर्ण अवरोधको अनुभव गरे। विचारहरूको आवेगपूर्ण आदानप्रदानको क्षति, अध्ययन गर्ने ठाउँको क्षति, र दुई साना बच्चाहरूको आमाको रूपमा ट्यारिनले बच्चाको स्याहार र निःशुल्क खानाको पहुँच गुमाइसकेको छ। टेरिनका लागि कलेज उनको शैक्षिक र व्यक्तिगत बृद्धि मात्र थिएन, तर यो उनको सामाजिक सुरक्षा नेट पनि थियो। “मेरो लागि वित्तीय सुरक्षा कडाई स्कूलमा भएकोमा जोडिएको थियो। जब कोभिड भयो, म मेरो उत्तेजना जाँच पाइन, मेरो श्रीमान्को काम गर्ने घण्टा कट्यो, मैले सरकारी सहयोग गुमाएँ। ” एमएएफ सीए कलेज विद्यार्थी सहायता अनुदान को एक प्राप्तकर्ता को रूप मा, Taryn आफ्नो परिवारको लागि खाना र आधारभूत आवश्यकता किन्न सक्षम थियो। उनको परिवारको लागि महत्वपूर्ण आय र खाना समर्थन गुमाउनुपरे पनि चुनौतीहरूको नयाँ सेटहरू सिर्जना गरे। तर टेरिनका लागि यो लगनशीलता र आशाको लामो कथाको अर्को अध्याय थियो।
प्रेरणा र आशा अप्रत्याशित क्षणहरूमा देखा पर्दछ
“मेरा बच्चाहरू म जे गर्छन् सबै गर्छन्। उहाँहरू पन्ध्र महिना पछि म स्कूल फर्कें र त्यो एकदम पागल हो। ”
31१ बर्षको उमेरमा, टेरिनले निर्णय गर्‍यो कि उनी आफ्ना बच्चाहरूसँग कलेजको स्नातक रेगिलियामा आफैंको तस्वीर राख्न चाहन्छन्। र त्यो गर्न आफ्नो जीवन मा एक विशेष अप्रत्याशित समय छान्नुभयो।
“जब म स्कूलमा फर्कें, मेरो बच्चाको हेरचाह थिएन, मैले भर्खरै मेरो कार जम्मा गरेको थिएँ, नरमाइलोपनको कारण हामीलाई हाम्रो आवासबाट जबरजस्ती हटाइएको थियो। त्यसोभए, म बस्ने बस्ने ठाउँ थिएन, मेरो बैंक खाता छैन, काम छैन, कार थिएन, यी दुई नवजात शिशुहरू थिए। म वास्तवमै आफैलाई बताउन चाहान्छु कि यो स्कूल फर्कने समय थिएन। तर म जाँदैछु। ”
दस वर्ष भन्दा बढी पहिले, Taryn कलेज सुरु गरेको थियो तर अन्तमा एक स्थायी विश्राम लिनुपर्‍यो। ट्यारिनले वर्षौंसम्म स्कूल जाने र एउटा पछि अर्को कर्भबलसँग व्यवहार गर्ने ध्यान केन्द्रित रहने प्रयासको कष्ट वर्णन गर्दछ। पालनपोषण हेरचाह प्रणालीमा हुर्केका, टेरिनले एक दर्जन भन्दा बढी प्राथमिक स्कूलहरू हुर्किएका थिए। उनी धेरै पटक सरुन्न् उनी चिन्तित थिइन कि उनलाई कसरी राम्रोसँग पढ्न र लेख्न आउँदैन। जब उहाँ १ was वर्षको हुनुहुन्थ्यो, उनको बुबाले जागिर गुमाउनुभयो र शहर छोड्नुभयो। उनी घरबारविहीन भइन्। उनले पदार्थको दुरुपयोग र उदासिनता अनुभव गरे। "आधारभूत खाना, आश्रय, र कपडा प्रदान गर्न असमर्थ, स्कूल मेरो लागि प्राथमिकता थिएन।" कलेजबाट बिदा लिएको करिब १० बर्ष पछि टेरिनले उनको सहयोगी डिग्री लिन ल Long्ग बिच सिटी कलेजमा भर्ना गरिन। विद्यालयमा फर्केर आउने उनको लक्ष्य: उनको बच्चाहरूलाई देखाउनुहोस् कि एक वैकल्पिक भविष्य के हुन सक्छ। समय - जहाँ उनी आफ्नो जीवनमा थिई र जोसँग उनीसँग थिए - यो नयाँ सुरुवातको लागि सबै कुरा थियो।
देखीएको र सुन्ने क्षमताको शक्ति: समुदाय र स्वीकृतिमा आवाज खोजी गर्दै
Taryn को शैक्षिक पथलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न उनको रसायनशास्त्र कक्षामा त्यो "A" लिनुभयो। त्यसपछि उनलाई ऑनर्स प्रोग्राममा सिफारिस गरियो। ट्यारिनलाई त्यस्तै लागेको थियो जस्तो उनी थिइन् सबैमा, त्यो एक अविश्वसनीय हाँसो संग सम्झना।
"त्यस सम्मान कार्यक्रममा सम्मिलित हुनु र त्यहाँ मानिसहरूलाई समावेश गर्नु भनेको म को हुँ भनेर मलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार्छु - र मलाई मेरो भेटघाट गर्ने क्रममा म कहाँ भेटेको थिएँ - वास्तवमै मैले बल पाएँ।"
उनको आराम क्षेत्रबाट बाहिर निस्केर जानको लागि त्यसले आगो दियो। जनताको प्रोत्साहनले उनलाई प्रेरणा र उनीमाथिको विश्वासलाई उकालो दियो। र त्यसपछि यो भयो: उनले उनको पहिलो GP.० GPA पाए। "त्यो 4.0.० पाउँदा मलाई यो महसुस भयो कि मैले मेरो अघिल्लो अनुभवहरूमा आधारित भएर आफूलाई न्याय गर्न हुँदैन।" उनलाई अब थाहा थियो कि उनले अझ अगाडि जानु पर्छ।
२०१ 2018 मा, टेरिनले राष्ट्रपति स्कॉलरशिपको साथ क्याल स्टेट युनिभर्सिटी ल Long्ग बीचमा हस्तान्तरण गरे जुन विश्वविद्यालयबाट सम्मानित सबैभन्दा प्रतिष्ठित मेरिट-आधारित छात्रवृत्ति हो।
"ती छात्रवृत्ति १ 18 बर्षीय, नयाँ स्कूल बाहिरका स्कूलका विद्यार्थीहरूका लागि हुन्, जससँग 4.0. GP GPA भन्दा बढी छ। म मेरो's० को उमेरमा छु, म घरमा बच्चाहरु छन्, मसँग संचयी 4.0.० GPA छैन। मलाई लाग्यो कि उनीहरू मसँग के चाहन्छन्? ”
तर ट्यारिनले उनको आवाज क्याम्पसमा भेटिन। उनी आइपुग्दा प्राप्त गरेको समर्थन यति ठूलो थियो कि, उनी अन्ततः उनी सँधै शान्त रहेको आफ्नो जीवनको एक हिस्सा बाँड्न सहज महसुस गर्छिन्: उनलाई पहिले जेलमा राखिएको थियो। ट्यारिनलाई उसको जुम्ल्याहा बच्चा जन्मिनु अघि झ्यालखानामा राखिएको थियो। उनी पहिले त्यो ल्याउन कहिल्यै चाहिनन्, किनभने उनी महसुस गर्छिन् कि उनी अविश्वसनीय मानिन्। उनीले सोचेकी थिइनन् कि मानिसहरूले वास्तवमै उनी एक "परिवर्तित महिला" हुन् भनेर विश्वास गर्छन्।
उनले खोल्नमा उपचार पाइन्। "यो स्वतन्त्र, नम्र थियो, र किनभने म स्वाभाविक रूपमा धेरै ठूलो र स्वतन्त्र-उत्साहित छु, मैले भर्खर यसमा टेप गरें। यसले मलाई अत्यन्त आत्मसम्मान दियो। " उनीले आफ्नो पृष्ठभूमि भएका विद्यार्थीहरूबाट सुनिरहेकी थिइन कि उनको खुलापनले उनीहरूलाई पनि निको पार्न मद्दत गरिरहेछ। ट्यारिनले उनको समुदायको समर्थनमा सामर्थ्य फेला पारे, र यो शक्ति प्रयोग गर्न प्रेरणालाई उत्तेजित गर्न।
कथालाई विद्वान र वकिलको रूपमा परिवर्तन गर्दै: COVID पछाडि हेर्दै-19
कोविड हिट हुनु भन्दा पहिले, टेरिनले पूर्वाग्रह र न्याय सम्बन्धी TEDx कुराकानी मात्र गरेका थिए, विशेष गरी पहिले बन्दी बनाइएका व्यक्तिहरू र उनीहरूको बारेमा नकारात्मक नक्कलहरू। “म ब्लेजर खोलेर स्टेजमा आएको छु, र मानिसहरूले मलाई खास प्रकारको आदरले हेर्छन्। त्यसपछि, केहि समय पछि, म मेरो ब्ल्याजर बन्द गर्दछु, ट्याटुहरूको गुच्छा देखाउँदै, र व्यक्तिहरू मेरो छेउमा अझ बढी सचेत हुन्छन्। त्यसोभए उनीहरूले मलाई अर्कै दृष्टिकोणले हेरे। तिनीहरूले मलाई न्याय गर्छन् र म यो महसुस गर्न सक्छु। ”
टेरिन उच्च शिक्षा प्राप्ति स्तरमा पहिले कैदमा परेका र युवा सम्भावनाहरूलाई बढावा दिनका वरिपरि कथा परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छ।
उनी पीएचडी कार्यक्रममा आवेदन दिन र एक दिन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक बन्न चाहन्छिन ताकि उनी आफ्नो समुदायको पक्षमा वकालत गर्न र सहयोग गर्न सक्छिन्। टेरिन यस डिसेम्बर मा स्नातक को योजना को लागी एक डबल स्नातक प्रबंधन र संचालन मा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को साथ।
हो, उनी गहिरो चिन्ता गर्छिन् COVID को प्रभावहरु बारे र उनी कसरी उनीहरुका बालबालिकाको स्कूल तालिकाको व्यवस्थापन गर्ने छन् कि उनीहरूले भर्खरै भर्खरै किन्डरगार्टन सुरु गरिरहेछन्।
"महामारीको बखत कलेजमा अभिभावक बन्नु भनेको मैले धेरै गाह्रो परिस्थितिको सामना गरें।"
जब उनी आफ्नो थेसिस समाप्त गर्छिन्, उनको इंटर्नशिप पूरा गर्छिन्, पीएचडी प्रोग्रामहरुमा लागु हुन्छन्, र सक्रियतापूर्वक उनको परिवारको आवश्यकताहरुलाई जुटाउँछिन्, टेरिनले अर्कोको अगाडि एउटा खुट्टा राखीरहेकी छिन् र अगाडी आफ्नो यात्रा जारी राखिरहेछिन्। उनी गर्वका साथ मलाई उनको बच्चाहरूको साथ उनको सहयोगी डिग्री स्नातक फोटो को एक क्यानभास देखाउँछिन् - पूर्ण regalia र सबै। उनी अधिक तस्वीर स collect्कलन गर्न कुर्दैछिन्।
"मेरो सबैभन्दा ठूलो आशा यो हो कि मानिसहरूले बुझ्नेछन् कि तपाई साँच्चिकै गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले चाहानु भएकै काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो समुदाय खोज्नु पर्छ। तपाईं आफ्नो आवश्यकताहरू के हो भनेर कुरा गर्न इच्छुक हुनुपर्छ, र त्यसपछि तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा भइरहेको छैन जब भन्नुहोस्। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईं अधिक सोध्न इच्छुक हुनुपर्छ - तपाईंले यो जान्नुपर्दछ कि तपाईं बढि माग्न लायक हुनुहुन्छ। र, केहि पनि सम्भव छ"
"कुनै पनि अन्तिम शब्दहरू?" "म सोध्छु, अझै पनि ट्यारिनको जीवन पाठको आकस्मिक सारांशको गहिराइमा भिजेको। "हो, मास्क लगाउनुहोस्!" उनी हाँस्दै हाँस्छिन्।